Su'aalaha La Weydiiyo - Shengshuo qiray Makiinado Co., Ltd.
Q1: Waa maxay walxaha saxanka lafdhabarta?
A1: SUS 630 oo leh been abuur
S2: ma waxaa la heli karaa muunad?
Q3: waa maxay waxyaabaha ugu muhiimsan?
A3: saxanka spinneret-ka ee loo yaqaan 'fiber-bi-fiber' (badda-jasiirad / galka-xudunta / segment-pie / spandex) & wareejin qallalan & dhar aan tolmo lahayn (dhalaalay oo boodbooday / ruxmay) & xarig soosaar dhar aan tolmo lahayn
Q4: sidee ku saabsan baaxadda dhexroorka godka micro?
Q5: waa maxay dhererka / dhexroorka godka?
A5: 1: 5-1: 20
S6: waa maxay muddada bixinta?
A6: hadda waxaan KELIYA aqbalnaa L / C ama 50% dhigista mar aan amarka saareyno ka dibna bixino inta hartay ka hor inta aan la soo dirin. Si loo badbaadiyo kharashka, waxaan door bidnay muddada bixinta TT.
S7: sidee ku saabsan waqtiga hogaaminta?
J7: caadiyan waxay qaadan doontaa 25 maalmood kadib helitaanka dhigaalka.
Q8: miyaa la heli karaa?
Q9: ma la heli karaa ODM ama OEM?
J9: labadaba waa la heli karaa
S10: sidee ku saabsan dammaanadda?
A10: waxaan bixinaa dammaanad qaadasho hal sano ah hadiiba aysan jirin arrimo bini aadamnimo.
S11: ma leedahay xafiis dibedda ah?
A11: waxaan ka fikireynaa inaan 1 ka dhignay Yurub iyo 1 koonfur bari Aasiya ...
Sifeeyaha Filimka Pp, Habka Wax Soosaarka ee Dharka Aan Xidhnayn, Filterka dhalaalaya ee Pp, Khadka Waxsoosaarka Maqaarka ee Aan Ku Xidhnayn, Waxyaabaha Maqaarka ah ee Aan Xidhnayn, Dharka Aan Xidhnayn, Dhammaan Alaabooyinka